Nke a bụ ihe kpatara ndị mmadụ ji kpọọ ọdịnaya gị asị | Martech Zone
Weebụ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha maka ozi maka ndị niile na-ege ntị yana ọ dị mkpa iji hụ na ọ bara uru ma na-emetụta ihe ka ndị mmadụ na azụmaahịa wee gbalịsie ike. Ntughari dijitalụ na-achọ. Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịdị iche, dị mkpa ma dị ọhụrụ na ọdịnaya ozugbo chọrọ itinye ndị na-agụ ya aka. Ọdịnaya kwesịrị ịdị nkọ, ọ kwesịrị ịdị na-akpali akpali ma ọ ga-edo anya.
Ọ bụghị banyere idebe; ọ bụ ndu ndu. Ọ bụ ya mere ị ga - eji buru otu ụzọ n’iru mgbe ị na - ede ederede dị mma yana ụzọ kacha mma iji mee nke ahụ karịa ịgbanye ndị na - ege ntị. Ike dị na aka ha kpamkpam. Enweghị otu atụmatụ ọdịnaya na-arụ ọrụ maka mmadụ niile, ọ ga-abụrịrị omenala emere maka ndị na-ege ntị ọ bụla. Ndị mmadụ nwere mkpa dị iche iche ma ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịchọpụta ọtụtụ ihe gbasara mkpa ndị ahụ.
Ọ bụ ya mere anyị ji mee nyocha a - Anyị chọrọ ịchọpụta ihe ndị mmadụ na-atọ, ihe na-adịghị atọ ha ụtọ, ihe masịrị ha na ihe ndị na-adịghị amasị ha ma a bịa na Wide Web. E mere nnyocha ahụ na mmadụ 712 dị afọ 18-65 + ma ọ bụ ebe a ka anyị nwere ike ịchọpụta ihe na-eme ezigbo ọdịnaya dị mma yana ọdịnaya adịghị mma. Ọ bụ data dị ka nke a na-enyere Stratton Craig aka mepụta nnomi, site na e-commerce na blọgụ na ọ nwekwara ike inyere gị aka. Stratton Craig
Achọpụtara ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na-atọ ụtọ, yana ụfọdụ ihe ijuanya. Ị maara:
Ọdịnala na-elekọta mmadụ dị mkpa karịa ọgbọ ndị ọzọ?
your ụlọ ọrụ blog agaghị eru 18-24 afọ.
Naanị mmadụ 2 n’ime 712 mmadụ kpori ahia na ntanetị!
Stratton Craig bụ ụlọ ọrụ nkwukọrịta ederede nwere ọfịs na London na Bristol. Ha jụrụ ọtụtụ ajụjụ ịhọrọ ọtụtụ ihe dị mma na ọdịnaya dị njọ ma mepụta ozi iji gosipụta nsonaazụ:
Tags: Blọọgụdoo anyacontent Marketingụlọ ọrụ ịde blọgụdesignoyiyimarketingVidio Ahịasoshal midia ọdịnayaStratten craigTeknụzụ / Intanetederedeọdịnaya vidiyo